နားခိုရာ: October 2007
ဆရော်ကတာ ရဲ့ လက်ရာ
ကျွန်တော့်အကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ဇနီး ... ကျွန်တော်တို့က ဆရော်ကတာ (ဆရာကတော် ပေါ့ဗျာ) လို့ ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ မ၀ါရဲ့ ဆုရဓါတ်ပုံလေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဓါတ်ပုံပညာအသင်းရဲ့ သင်တန်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ Trip ထွက်ရင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ သင်တန်းသားတွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရတာပါ။ Congratulation!!!!
ဒို့အကိုကြီးတို့ အကြံပိုင်ပုံများ မိန်းမကို ဓါတ်ပုံသင်တန်းပို့ပြီး ပိုးသွင်းပေးထားတော့ ကင်မရာအသစ်တွေ မှန်ဘီလူးတွေ ဘာညာ ၀ယ်ချင်တဲ့အခါ မိန်းမငြိုငြင်တာမခံရတော့ဘူး။ မိန်းမက သင်တန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတော့ ကိုယ်တို့ ဘီယာဆိုင်အကြာကြီးထိုင်တာတွေကိုလဲ လိုက်ပြောမနေတော့ဘူး... ဂွတ် ဂွတ်
Posted by little moon at 4:36 PM No comments:
ခြေထောက်က နည်းနည်းပြန်ယောင်လာပြီး ပြန်နာလာတယ်။ မနေ့က ချောင်းသာကအပြန်ခရီးမှာ တစ်နေ့လုံး ကားပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်လာရလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီနေ့ အိမ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးနားမယ်လို့ စဉ်းစားပေမဲ့ ရုံးမှာ လုပ်စရာလေးတွေရှိတာကြောင့် မနားဖြစ်ပါဘူး။
လူက Body weight များလာတာလဲပါမယ်။ ဘတ်စ်ကားကြီးပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တာ ကံဆိုးချင်တော့ ခြေထောက်ချလိုက်တဲ့နေရာက ချိုင့်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ လူက ခွေကနဲ ပုံရက်လဲကြသွားတယ်။ မတ်တပ်တောင် ပြန်မရပ်နိုင်ဘူး။ ချောင်းသာအပန်းဖြေခရီးသွားမလို့လေ။ ရန်ကုန်ကတောင်မထွက်ရသေးဘူး။ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဖြစ်ကုန်ရော။ ကားဆရာတွေက ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ လိမ်းဆေးနဲ့ အကြောကပ်ပလာစတာလေး ၀ယ်ပေးကြရှာတယ်။ ဆေးလေးလိမ်း ပလာစတာလေးကပ်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲထိုင်လိုက်သွားတယ်။ ညောင်တုန်းရောက်တော့ အပေါ့အပါးသွားဖို့ ကားပေါ်ကဆင်းတော့ တွဲပြီးဆင်းရတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ညာခြေကိုထောက်လိုက်တိုင်းနာလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။
မနက်ချောင်းသာရောက်တော့ ညာခြေဖမိုး နဲ့ခြေကျဉ်းဝတ်တ၀ိုက် ဖောင်းကားပြီး ယောင်ကိုင်းနေပြီ။ ကိုယ့်အခန်းရောက်အောင် တွဲပြီးသွားလိုက်ရတယ်။ အိပ်ယာပေါ်လှဲနေရင်း ပင်လယ်ကြီးကိုပဲ လှမ်းငေးကြည့်နေရတယ်။ သူများတွေကတော့ ရေထဲဆင်းကုန်ပြီ။ အော် ... စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါတဲ့ ဒုက္ခက တော်တ်ာကြီးပါလားလို့လဲတွေးမိသွားတယ်။
ညနေရောက်တော့မှ ဆိုက်ကားလေးခေါ်ပြီး ဆေခန်းသွားပြလိုက်တယ်။ ဆရာဝန်လေးက ဆေးတစ်လုံးထိုးပေးပြီး သောက်ဆေးတွေလဲပေးလိုက်တယ်။ ရေခဲလဲအုံပါတဲ။ ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ရေခဲလေးလှမ်မှာ လိုက်တယ်။ ခြေတောက်ကို ရေခဲအုံရင်း သယ်လာတဲ့ ပန်းဂျုံ ဂျပန်အရက်ပုလင်းလေးထုတ်သောက်နေလိုက်တယ်။ အရက်သောက်ပြီးမှ ဆေးသောက်တာပေါ့။ ချောင်းသာရောက်ရင် အမြဲလုပ်ဖြစ်တာတစ်ခုက သောင်ပြင်ပေါ်လာရောင်းတဲ့ ဈေးသယ်တွေဆီက ပုဇွန်တွေ ဂုံးတွေ ဂဏန်းတွေ ၀ယ်ပြီး အ၀အပြဲစားပစ်တာပဲ။ ခြေတောက်ကလည်းနာနေတော့ ဘယ်မှလဲမသွားနိုင် လာသမျှဈေးသည်တွေခေါ်ပြီး ၀ယ်စားနေတော့တာပဲ။ ပုဇွန်ကင်တွေနဲ့ ပန်းဂျုံအရက် ... အင်း .... လိုက်ဖက်သားပဲဗျ။
သီဟိုစေ့နဲ့ ပန်းဂျုံအရက်က ရန်ကုန်ကတည်းက၀ယ်သွားတာ။ ကျန်တာတွေက ပုဇွန်ကင်ရယ်၊ ဂုံးကင်ရယ်၊ သရက်တောမုန့်ရယ်။
အင်း.... စာရင်းချုပ်လိုက်ရင် weight ပြန်လျှော့ရတော့မယ်လို့ ကောက်ချက်ချမိတယ်။ အခု ကိုယ်အလေးချိန်က ၁၉၂လောက်ရောက်နေပြီ။ ဒီခြောက်လ ခုနစ်လမှာ ပြန်ဝလာတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ ခြေတောက်ကျိုးမသွားလို့။ အခုနာနေတာလဲနောက် လေးငါးရက်လောက်ခံရဦးမယ်ထင်ပါ့။
Posted by little moon at 10:16 AM 1 comment:
ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ ချစ်သောပါဒဧကရီ စာအုပ်ထဲက အခန်းတစ်ခုတစ်ခု အစက စာပိုဒ်လေးတွေပါ။ လှလွန်းလို့ ကဗျာဆန်လွန်းလို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ စာအုပ်အပုံရှင်းရင်း ဒီစာအုပ်လေးပြန်တွေ့တာနဲ့ ပြန်လှန်ဖတ်ကြည့်ရင်း နည်းနည်းလည်း အားနေတာနဲ့ ကွန်ပျူတာထဲ ရိုက်ထားလိုက်တယ်။
ဧကရီ [ အနုလောမချစ်မေတ္တာ]
လွင့်ပျံနေသောတိမ်တို့၏ အရောင်စုံကိုလည်းကောင်း၊ လှုပ်ခါသောပန်းပွင့်တို့၏ အသွေးစုံကိုလည်းကောင်း၊ ယိမ်းနွဲ့နေသော သစ်ရွက်တို့၏ အဆင်းစုံကို လည်းကောင်း၊ ငါသည် ငါ၏ ပန်းချီကားချပ်ပေါ်သို့ တိကျပြတ်သားစွာ ပို့ဆောင်ခြယ်သနိုင်စွမ်းရှိပါ၏။
ကျောက်အင်တုံအတွင်းဝယ် ငါသည် ကမ္ဘာလောက၏ အရောင်အားလုံးကို ရောစပ်ဖန်တီးနိုင်၏။ ပန်းချီကားချပ်ပေါ်၌ ငါသည် ကမ္ဘာလောက၏ အဖြောင့်အတန်း၊ အလင်းအမှောင်၊ အနီးအဝေး၊ အထုအထည်၊ အချိုးအကွေ့၊ အတွန့်အကောက် အားလုံးကို တမုဟုတ်ချင်း ကူးယူဖန်ဆင်းနိုင်၏။
ဆေးတို့ထားသော စုတ်တံကို ဖွဖွရွရွ ကိုင်ထားသော ငါ၏ လက်ချောင်းတို့သည် ကြုံလှီဖျော့တော့နေကြသော်လည်း ထိုလက်ချောင်းများဖြင့်ပင် လောကတစ်ခုလုံးကို ငါဆုပ်တွယ်နိုင်ပါ၏။
လောက၏ အလှအပ အလုံးစုံသည် ငါ့စုတ်တံ၊ ငါ့ဆေးစပ်အင်တုံ၊ ငါ့ ပန်းချီကားချပ်၌ ဦးညွပ်ပျပ်ဝပ်နေကြရ၏။ အို ... ချစ်သူ .... သို့ပါသော်လည်း
သင်၏နှုတ်ခမ်းတစ်လွှာမှ၊ သင်၏မျက်တောင်တစ်ကော့မှ၊ သင်၏ ဆံတစ်ပင်မှ၊ သင်၏ ရင်ဝတ်တန်ဆာတစ်ချည်မျှင်မှ၊ သင်၏လက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှ၊ သင်၏နဖူးပြင်တစ်စမှ၊ သေးငယ်သော အလှအပတစ်ခုခုကိုသော်မှပင်၊ ငါ့ပန်းချီကားချပ်ပေါ်၌ ရေးခြယ်ရန် ငါမတတ်နိုင်ပါတကား။
ရောင်ငါးခုရှိသော မဟာဂန္ဓဗ္ဗ အမျိုးအနွယ်လည်းဖြစ်ပေသော၊ လောက၏ ဂီတမှူးလည်းဖြစ်ပေသော ပဉ္စသီခနတ်သားသော်မှပင် သုံးဂါဝုတ် ပမာဏရှိသော ဥသျှစ်မှည့် အဆင်းကိုဆောင်သော ဗေဠုဝပဏ္ဏု နတ်စောင်းဖြင့် ချစ်သူ သူရိယ၀စ္ဆသာဒေ၀ီ၏ အလှကို ဖွဲ့ဆိုတီးခတ်ခဲ့ပေ၏။ တစ်ဆယ့်ငါးပုဒ်သော ဂါထာတို့ဖြင့် သူ၏ ချစ်မေတ္တာကို သီကျူးဖွင့်ဟနိုင်ခဲ့ပေ၏။ အော် ... ငါမူကား ပဉ္စသီခနတ်သားကဲ့သို့ မဟုတ်နိုင်ပါတကား။
သင့်အလှ၌ နစ်မြောစီးဝင်ခဲ့ရသော ငါ့သည်းပွတ်နှလုံးတို့သည် မဟာသမုဒ္ဒရာမှ လှိုင်းတံပိုးကဲ့သို့ ဆူဝေမြင့်မောက်ခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ ငါ၏ချစ်မေတ္တာတို့ကို ပဉ္စသီခကဲ့သို့ပင် နှုတ်မှထုတ်ဖော်မသီကျူးနိုင်တော့ပါ။ ပဉ္စသီခ၏ ဗေဠုဝပဏ္ဏုမှ စောင်းသံသည် လေးလတိုင်အသံမစဲဟု အဆိုရှိ၏။ ငါသာစောင်းသမားဖြစ်ခဲ့မူ သင့်အလှကိုဖွဲ့ဆိုတီးခတ်နိုင်ခွင့် ရခဲ့မူ ငါ့စောင်းသံသည် လေးလ လေးနှစ် လေးအသင်္ချေ အနေန္တ အသံမစဲသည် ဖြစ်ကောင်း၏။
သင့်အား စတင်တွေ့မြင်ရသော အချိန်မှစ၍... ငါ့မျက်လုံးအစုံသည် သင့်ရုပ်သွင်မှတစ်ပါး အခြားသောအရာတို့၌ ကန်းကွယ်ခဲ့ပြီ .... ငါ့နားတို့သည် သင့်အသံမှတစ်ပါး အခြားသော အရာတို့၌ ဆွံ့အခဲ့ပြီ ....ကမ္ဘာလောကအား ဖန်ဆင်းနိုင်သော ငါ့လက်ချောင်းများအတွင်းမှ ပုံရေးစုတ်တံသည် သင့်မျက်နှာမှတစ်ပါး အခြားသောအရာတို့၌ ရေးဆွဲခြယ်သရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပြီ။
သို့သော်သင့်အလှ၏ သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းတစခုခုကိုသော်မှ ငါရေးဆွဲခြယ်သခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ပါတကား .....။
ငါ၏ညှို့ကြိုးမှ လွှတ်အပ်သော မြားသည် လေကိုဖောက်ခွဲလျက် တူရူအရပ်သို့ တည့်တည့်မတ်မတ်ပျံသန်း၏။ မြား၏ ချွှန်မြသော အသွား၌ ပြင်းထန်သော အဆိပ်ရည်တို့ လိမ်းကပ်လျက် ကော့ပျံသောအမြီးဖျား၌ နုညက်သော ငှက်ခါးမွေးတို့ စီသွယ်လျှက်....
ပိတုန်းတောင်ပံခတ်သံသို့သောအသံကို စွဲမြည်စေလျက် လေကို ဖောက်ခွဲပျံသန်းသောမြားသည် ချစ်သူ၏ အသည်းနှလုံး၌ တည့်မတ်စွာ စူးနစ်စိုက်ဝင်ပြီ။ သို့တစေ။ မြားသွားမှ ပြန်ထန်သော အဆိပ်ရည်တို့သည် ချစ်သူအား စိုးစဉ်းမျှ မထိခိုက်ပါ။ မြားသွားသည် သင်၏ အသည်းနှလုံး၌ စူးနစ်စိုက်ဝင်သည် ဆိုခြင်းကိုသော်မှ ချစ်သူသိအံ့မထင်ပါတကား။
အိုချစ်သူ ... သင့်အား အဆိပ်ရည်တို့ပျံ့နှံစေချင်၏။ ဦးထိပ်ဆံဖျားမှသည် ခြေဆုံးထိပ်ဖျားထိ အဆိပ်ရည်တို့ ကူးစက်ဖြန့်ကျက်စေချင်၏။ ငါ့မြားတံကြောင့် သင်၌ ပြင်းထန်စွာ တုန်လှုပ်ခြောက်ချားခြင်း ဖြစ်သည်ကို ငါအလိုရှိ၏။
သို့သော် .... သင်ကား၊ ငါ၏မြားတံကို ပီဘိ လျစ်လျူရှုနိုင်အားပေ၏။ ငါ၏မြားတံသည် သင့်အား စဉ်းငယ်မျှပင် မတုန်လှုပ်စေပြီလော၊ သင်ကား မတုန်လှုပ်၊ တုန်လှုပ်ရသူကား ငါကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ချေပြီ။
ငါ၏ အသည်းနှလုံးကို ထုခွဲဖြတ်တောက်၍ ပြုလုပ်စီမံထားအပ်သော လေးကိုင်း လေးညှို့၊ မြားတံ၊ အဆိပ်ရည်တို့သည် သင့်အား မထိခိုက်ဟု သိရသောအခိုက်၌ ငါသည်ပင် တုန်လှုပ်ခဲ့ရချေပြီ။
အို... ချစ်သူ ... နောက်ထပ်မြားတစ်စင်းကို ငါထပ်မံပြင်ဆင်အံ့ .....
သင့်ကိုမှ ချစ်မြတ်နိုးမိလေသည့် ငါ့၏ နှလုံးသည်းပွတ်တို့ကို ငါကိုယ်တိုင်ပင် ပြန်လည်တုန်လှုပ်မိပါပြီ။ ဤနှလုံးသည်းပွတ်တို့ကို ငါ့ရင်တွင်း၌ ထားသိုရန် ငါကြောက်ရွံ့မိပါပြီ။ ဤသို့သော နှလုံးကို ငါ့ရင်တွင်း၌ ငါမထားသိုရဲတော့ပါ။
သို့အတွက် .... ငါ၏ အသည်းနှလုံးအားထုတ်ယူလျက် စကြာဝဋ္ဌာ တံတိုင်းသို့ ငါကိုယ်တိုင်ပစ်လွှတ်ဖောက်ခွဲလိုက်၏။ တစ်ခဲနက်သောအသံဖြင့် ငါ့အသည်းနှလုံးသည် အစိတ်အမွှာ အပိုင်းအစ ကြေပြန့်စင်ပြီ။
သို့သော်.... အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာသော အသည်းနှလုံး၏ အပိုင်းအစတို့သည် တစ်မုဟုတ်ချင်းပင် တစုတဝေး ပြန်လည်ပေါင်းဆုံ၍ တစ်ခုသောနေရာသို့ သက်ရောက်ကိန်းဝပ်နေကြသည်။
အို.. အသည်းနှလုံး အဘယ်နေရာသို့ ကိန်းဝပ်လေသနည်း။ ချစ်သူ .... ယင်းနေရာကား သင်၏ ခြေဖမိုးအစုံ ရှေ့မှောက်တွင် ဖြစ်ပြန်ချေသည်တကား ....။
Posted by little moon at 12:12 PM No comments:
Online MBA (Myanmar)
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဘွဲလွန် ဒီပလိုမာအဖြစ် D.M.A ကိုသာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းကာလမှာ အစိုးရရုံးများက အရာရှိများသာအများစု တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်မှာတော့ private sector ကိုပါ တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တဆင့်အနေနဲ့ MBA သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားပါတယ်။ တစ်နေ့လုံးတက်ရတဲ့ သင်တန်းမျိုးဖြစ်ပြီး ၂နှစ်အချိန်ပေးရမှာမို့ အလုပ်ခွင်မှသူများအတွက် အခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် Executive MBA ဆိုပြီး ညနေပိုင်း အချိန်ပိုင်း ၂နှစ်သင်တန်းကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်၃၀အထက် မန်နေဂျာနှင့်အထက် အဆင့် လုပ်သက်အနည်းဆုံး ၈နှစ် နဲ့ အသိမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုက ဘွဲတစ်ခုရထားရပါမယ်။ ဒါအပြင် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲနဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ကို အောင်မြင်ပါမှ တက်ခွင့်ရမှာပါ။ အခုဆိုရင် Day MBA 13 တန်း နဲ့ EMBA6တန်းရှိခဲ့ပါပြီ။
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနက နိုဝင်ဘာလမှာ online MBA course ကို စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Online ကနေ MBA Course များကို သင်ယူခွင့်ရစေမဲ့ Online MBA သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအထောက်အကူပေးတာကတော့ MIT company ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၅နှစ်နဲ့အထက်၊ ဘွဲတစ်ခုရပြီး Executive Level working experience ၅နှစ်ရှိရပါမယ်။ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲတော့ မရှိပါဘူး။ Online ကနေလျှောက်ထားရမှာပါ။
သင်ကြားမှုအနေနဲ့ online lectures and seminars များကို အများဆုံး အသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လေးလံနှေးကွေးနေတဲ့ မြန်မာပြည် အင်တာနက်ကြီးနဲ့ ဘယ်လိုများ သင်ကြားကြမယ်တော့ မသိပါဘူး။ စာသင်သားအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assignment များကို လုပ်ပြီး submitလုပ်ရပါမယ်။ စာမေးပွဲအတွက် exam request form နဲ့ လျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက် နှစ်ပတ်အကြာမှာ ယင်းဘာသာရပ်အတွက် စာမေးပွဲလာဖြေရပါမယ်။ (လောလောဆယ်တော့ ပတ္တမြားဆောင်မှာပါပဲ)။
ွှTution Fees အနေနဲ့ တစ်ဘာသာကို K 50,000 စာမေးပွဲကြေးက K 15,000 စုစုပေါင်း 65,000 ပါ။ စုစုပေါင်း 24 Subjects ဆိုတော့ K 1,560,000ပါ။ ဒါ့အပြင် Annual Fees တစ်နှစ်ကို K 50,000 နဲ့ ၂နှစ်ဆိုတော့ တစ်သိန်း အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ၁၇သိန်း လောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ (စာအုပ်ဖိုးဆိုတာကို ထည့်မတွက်ထားသေးပါဘူး။ စာအုပ်ဖိုးအနေနဲ့ ပျမ်းမျှ တစ်ဘာသာတစ်သောင်း နဲ့ ၂၄ ဘာသာဆိုတော့ နှစ်သိန်းလေးသောင်းပါ။)
ညနေပိုင်း သင်တန်းလာတက်ဖို့တောင် အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူများအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ Course တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ကုန်ကျငွေကတော့ Day MBA, EMBA တို့ထက်ပိုများနေပါတယ်။ (MBA, EMBတို့ အတွက် အကြမ်းအားဖြင့် ၂နှစ်စာ ကျသင့်ငွေ ၅သိန်းခွဲလောက်ရှိပါတယ်။ ဖတ်စာအုပ်များကို ဘွဲ့ရပြီး မိမိ အသိ မိတ်ဆွေများထံမှ ငှားပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ၂သိန်းလောက်သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် အသုံးပြုတဲ့ဖတ်စာအုပ်မတူပဲပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ New Edition ထွက်တယ်ဆိုရင် အချို့ ဆရာ ဆရာမများက အသစ်ကို ကိုင်ပြီး သင်တတ်ပါတယ်။)
မန်နေဂျာများ Executive များအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ EMBA Course ကတော့ ထိရောက်အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အခု Online MBA Course က ဘယ်လိုဖြစ်လာဦးမယ်ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည်ရဦးမှာပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တော့www.elearning.edu.mm မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းပြောဖူးသလိုပါပဲ MBA Course ဆိုတာမျိုးက ကိုယ့်ရေပုံး ကိုယ်ယူလာပြီး ကိုယ့်ဘာသာ အားထုတ်ပြိး ရေခပ်ထည့်ရမှာပါ။ တစ်ချို့က MBA သာလာတက်တယ် ရေပုံးပါမလားဘူး။ တစ်ချို့ကြတော့ ဆရာဆရာမတွေ ခပ်ထည့်ပေးမယ်ထင်ပြိး ကိုယ့်ဘာသာ ရေမခပ်ကြဘူး။ အနည်းစုသောသူများသာ အပတ်တကုတ်နဲ့ကြိုစားပြီး ကိုယ့်ရေပုံးထဲ ကိုယ့်ဘာသာရေခပ်ထည့်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ ၂နှစ်သာပြီးသွားတယ် ကိုယ့်ရေပုံးထဲမှာ ရေမရသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ ဒီအချက်ကတော့ ကျောင်းမှာ အတန်းလာတက်တာ ပဲဖြစ်ဖြစ် Online ကသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Posted by little moon at 6:16 PM 26 comments:
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းအနေနဲ့ ကျင်းပတဲ့ ပြိုင်ပွဲလေးပါ။ IT လောကကလူငယ်တွေ programmer တွေအတွက် activity လေးတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပေးတာပါ။ ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားက ဒီနှစ်မှာ နှစ်မျိုးလုပ်တယ်။ windows application development နဲ့ web application development. ဆုကြေးကလည်း သိပ်များလှတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမ သုံးသိန်း၊ ဒုတိယ နှစ်သိန်း၊ တတိယ တစ်သိန်း၊ နှစ်သိမ့်ဆုရှိခဲ့ရင် ငါးသောင်း တစ်ခုပေးမယ်။ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေလောက်တောင်မပေးနိုင်ပါဘူး။
ဒီနှစ်တော့ web နဲ့ windows ကို မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမေးလိုက်တယ်။ Hotel Management System ထဲက Reservationအပိုင်းကိုပါ။ ပြိုင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို programmer နှစ်ယောက်ပါတယ်။ တစ်ရက်စာ (၈နာရီ)အချိန်ပေးပါတယ်။
အဲ ... ဒါတွေထားပါတော့။ ပြောချင်တာက ဒါတွေမဟုတ်ဘူး။ မနေ့က သူတို့လေးတွေ ရေးသွားတဲ့ program တွေကို ဆုပေးဖို့ အကဲဖြတ်ရင်း တွေ့တဲ့ အချက်လေးတွေပါ။
၁) ဘယ်ဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို မခွဲတတ်ကြဘူး။ ဒါကြောင့် ရေးသင့်တာတွေ ပြီးသင့်တာတွေ ပြီးမသွားကြဘူး။ Priority ပေါ့ဗျာ။
၂) Time management - အချိန်ကို manage မလုပ်တတ်ကြဘူး။ တစ်ချို့အဖွဲ့တွေဆို (သူတို့ဖြေကြတဲ့နေ့က) ကျွန်တော် အခန်းစောင့်ရင်း ကြည့်မိတယ်။) နေ့လည် ၁၂နာရီရှိနေပြီ သုံးပုံ တစ်ပုံလောက်တောင် မပြီးချင်ဘူး။ အဲဒီလိုမပြီးဘူး နောက်ကျနေပြီဆိုတာလဲ့ သူတွေတတွေ သိကြပုံမပေါ်ဘူး။ Time slip ဖြစ်ရင် project delay ဖြစ်ရင် ဘယ်လို action ယူမယ်ဆိုတာမျိုးကို တွေးမထားကြဘူး။
၃) Team work and coorperation - တစ်ချို့အဖွဲ့တွေမှာ ပါတဲ့ နှစ်ယောက်လုံးက ကိုယ်သန်ရာ စိတ်ထင်ရာ စိုက်ပြိးရေးနေကြတယ်။ တိုင်တိုင်မင်မင် planချပြီးလုပ်တာမျိုးမရှိသလိုပဲ။ မေးခွန်းပေးပြီးခဏပဲ ပြောကြဆိုကြတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဘာသာလုပ်နေကြသလိုပဲ။ Team effect မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။
၄) Programming is jsutatools - လုပ်ရမှာက ပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့၊ user လိုချင်တာကို ရေးပေးဖို့။ တစ်ချို့တွေလုပ်နေကြတာက ဒါတွေပြီးမြောက်ဖို့ထက် technology ကို ပိုပြီးဦးစားပေးနေတယ်။ တစ်ဖွဲ့ဆို C# နဲ့ Class တွေကို ရေးတဲ့ဆီမှာ နစ်နေတယ်။ တစ်ဖွဲဆို Source Safe ကို တစ်ခန်းတနားသုံးနေတယ်။ (ရေးတာကမှ နှစ်ယောက်ထဲ) ပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုးကာမှ ဆေးကြောင့်ပိုလေး ဆိုသလို technology ကို လိုတာထက် ပိုပြီး အာရုံစိုက်မှုကြောင့် လုပ်သင့်တဲ့ ပြီးသင့်တဲ့ အလုပ်တွေ ပြီးမသွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။
ဒါတောင့် General ပဲပြောထားတာ။ Programming specific ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောစရာတွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်။
Posted by little moon at 6:14 PM No comments:
EMBA Term Paper
အခုအချိန်မှာ EMBA သင်တန်းရဲ့ Term Paper အတွက် ဘာရေးရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေပါတယ်။ အဓိကရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ်။ Business or Industry area တစ်ခုခုကိုရွေးပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရေး။ Comfar software နဲ့ အသေးစိတ် financial and accounting data တွေထည့် run ... တွေ့ရှိချက်တွေကို analysis လုပ် .... ဒါက ရွေးစရာတစ်ခုပေါ့။ အတန်းသားတော်တော်များများက ဒါကိုပဲရွေးကြတယ်။ ရေးရမဲ့ ပုံစံ Frame ကကြပြီးသားဖြစ်နေတာကိုး။
နောက်ထပ်ရွေးစရာတစ်ခုက Marketing ခေါင်းစဉ်အောက်က Market Research, Survery, Consumer Behavior အဲဒါမျိုးတွေရွေးလို့ရတယ်။ ဒီအပိုင်းကိုက အတန်းသား လေးပုံတစ်ပုံလောက်ရွေးကြတယ်။ အပြင်လောကမှာ marketing field အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေက ဒီအပိုင်းကို ရွေးကြတာများတယ်။
ကျန်တဲ့ အနည်းစု (သုံးလေးယောက်လောက်)က Organizational Design and Development, HR သို့မဟုတ် Business Ethics ကို ရွေးလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာ Business Ethics ရေးလို့မရဘူး။ Supervise လုပ်ပေးမဲ့ ဒေါက်တာဒေါ်မိုးမိုးခိုင်က နယ်ပြောင်းရမှာမို့လို့။
ကိုယ်ရေးမဲ့ paper ကို ဘွဲ့တစ်ခုအတွက် တာဝန်ကျေ လုပ်လိုက်မဲ့အစား အခုကိုယ်လုပ်နေတဲ့ Field နဲ့ Organization အတွက် တစ်ခုခုအကျိုးရှိမှာမျိုးလေး လုပ်ချင်တယ်။ ကိုယ်တို့က software တွေရောင်းနေတာဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ software ဈေးကွက်အကြောင်းပေါ့။ အဲဒီမှာ ထပ်ပြီးအသေးစိတ်လိုက်ရင် post purchase evaluation, customer satisfaction ပေါ့။ အဲဒီအပိုင်းလေး လုပ်မလားလို့။
တစ်ချို့ အဖွဲ့အစည်းတွေ software ကို ၀ယ်ပြီးတော့မှ အသုံးမပြုနိုင်ပဲ ရပ်သွားတာတွေရှိတယ်။ ဘယ်အချက်တွေက သူတို့လုပ်ငန်းမှာ computer software မသုံးနိုင်အောင် တားဆီးနေတာလဲ။
လူတွေက စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ဘာလို့ ကိုယ်တို့ဆီက software တွေဝယ်လဲ။ ဘာတွေမျှော်လင့်လဲ။ သူ့တို့ အလုပ်ခွင်မှာ software ကို ၀ယ်ပြီးနောက်ပိုင်း အောင်အောင် မြင်မြင် ဆက်သုံးသွားနိုင်ဖို့ ဘယ်လို အချက်တွေက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ အရေးပါသလဲ -
၁) software product ရဲ့ အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု၊ ပါဝင်သော feature များ၊ အမှား ကင်းစင်မှု၊
၂) After sales service and maintenance - မြန်မာပြည်မှာက software ကို off the shelf ၀ယ်လာပြီး တစ်ခါတည်း ကိုယ့်ဘာသာ သုံးနိုင်ဖို့ ခက်မယ်။ start up and running က စလို့ software ရောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ service and support အများကြီးလိုတယ်။
၃) ၀ယ်သူဖက်က အချက်အလက်တွေ - ပိုင်ရှင် / Management ရဲ့ ပညာရေးအဆင့်အတန်း၊ IT Experience၊ မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ requirement နဲ့ software အသုံးပြုမဲ့ scope and boundary ကို ပိုင်းဖြတ်နိုင်မှု၊ Software အသုံးပြုမဲ့ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများရဲ့ turnover rate
၄) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု၊ မီးပျက်ချိန်တွင် computer သုံးနိုင်အောင် စီစဉ်ထားနိုင်မှု
စသည်ဖြင့် အဓိကအချက် လေးငါးခုနဲ့ Questionaire လုပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိ customer တွေကို survery ကောက်ကြည့်မယ်။ ဘယ်အချက်တွေထည့်မေးမယ် ဆိုတာတော့ အပြီးသတ်မလုပ်ရသေးဘူး။ တွေ့ရှိချက်လေးတွေနဲ့ analysis လုပ်မှာပေါ့။ Post purchase evaluation ပေါ်အခြေခံပြီး software house တစ်ခုအနေနဲ့ ဘယ်အချက်တွေကို ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလေး သိချင်လို့။
Posted by little moon at 12:05 PM No comments: